हस्तकलाको बजार विस्तार गर्न सरकारले के के गर्न सक्छ ? » aarthikplus
वि.सं.२०७८ मंसिर २ बिहीवार १६:११
रविन्द्र शाक्य हस्तकला महासंघमा उपाध्यक्ष हुन् । यही मंसिर ३,४ र ५ गते बौद्धस्थित हायात होटल परिसरमा महासंघले आयोजना गर्न लागेको १८ औं हस्तकला टे«ड फेयर तथा १६ औं हस्तकला प्रतिश्पर्धाका सन्दर्भमा हामीले मुख्य संयोजक समेत रहेका शाक्यसंग छलफल गरेका छौं ।
कोरोना महामारीले हस्तकलाको बजारलाई पारेको असरलाई हटाउन महासंघ हस्तकलाकर्मीहरुको विकाश बजारमा पहुँच पु¥याउन हामी यो १८ औं हस्तकला मेला बौद्धस्थित होटल हायातमा गर्दैछौं । यो मेलाले नेपाली हस्तकलाको बजार थप विस्तार गर्न सहयोग गर्नेछ । यो मेला यस्ता कोरोना माहामारीबाट अघि बढेकोे अवस्थामा महत्वपूर्ण छ । मेलाले हस्तकलाकर्मीहरुलाई धेरै सकारात्मक उर्जा दिनेछ ।
कोरोना माहामारीपछि हस्तकला क्षेत्रमा रहेका सबै क्षेत्रलाई असर गरेको देखिएन । परम्परागत हस्तकलालाई असर गरेको देखियो भने नयाँ हस्तकलामा खासै असर गरेको छैन । हाम्रो तथ्याङ्कले के भन्छ भने धेरै निसाश हुनु पर्दैन । यो बेला वार्षिक रुपमा १० अर्वमा निर्यात भइरहेको हस्तकलाको बजार ७ अर्वमा मात्रै खुम्चियो ।
पछिल्लो समय चार्टड फ्लाइटहरु महँगो हुँदा केही असर देखिएको छ । सबै फ्याइटहरु सुचारु हुँदा यो हटेर जान्छ भन्ने विश्वास छ ।
कारोनाका कारण धेरै मेला भइरहेका छैनन् । काठमाडौं लगायत देशभर हामीलाई प्रर्दशनी गर्न ठाँउ नै छैन । हामीले केही दिन अघि भाटभटेनीको पार्किङमा प्रर्दशनी गर्यौ । त्याहाँको प्रर्दशनी राम्रो भयो । यसले हामीलाई सकारात्मक उर्जा दिएको छ । त्यसैले हामी हायातमा प्रर्दशनी गर्न गइरहेका छौं ।
अहिले भृकुटीमण्डपको हलको मर्मतको काम भइरहेको छ । खुला ठाँउमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर हायतमा हस्तकला मेला गर्न लागेका छौं ।
नेपाल सरकारले १० अरव निर्यात हुने हस्तकलालाई प्राथमिता नै दिएको छैन । कच्चा पदार्थको एकदमै अभाव छ । नीतिगत कुनै व्यवस्था छैन । नीजि क्षेत्रले जे जति कच्चा पदार्थ ल्याउछ त्यसकै भरमा चलेको छ ।
उत्पादनका अवस्थामा हामी एकदमै सक्षम छौं । गुणस्तर सामान बनाएका पनि छौं । बनाउछौं ।
हस्तकला हेर्ने मन्त्रालय, विभाग केही पनि नहुँदा हाम्रो बारे बुझने हाम्रो समस्या सुन्ने कोही छैन । हाम्रो समस्या हेर्न एउटा सरकारी निकाय खडा गरिदिनु जरुरी छ । सम्भव भए मन्त्रालय नभए विभाग खडा गर्नु जरुरी छ । हामीले सरकारी निकयलाई अस्थिर सरकार र सरकारी निकायका कारण हामीले बुझाए पनि सरुवा भएर जाँदा हाम्रो समस्या अलपत्र परेको छ
धेरै कुरा गर्न सक्छ । सरकारले बार्षिक ४ अरवको बार्षिक पुरस्कार र उपहार दिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छ । यसलाई नेपाली हस्तकलाको सामान प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसलाई रुपान्तरण गरेर नेपाली हस्तकलाको सामान किन प्रयोग नगर्ने?
नेपाली व्युरोक्राट्मा रहेको चार पाँच लाख कर्मचारीलाई सबैलाई एउटा कोट नेपाली लगाउने व्यवस्था गरौं न । परिचय पत्र झुण्ड्याउने ढाकाको कपडा लगाईदिउ न । चाइनिज निको कपडा लगाउनु भन्दा । त्यो पैसा त विदेशमा गयो । पिविसी कार्डमा परिचय पत्र छाप्नु भन्दा नेपाली कागज प्रयोग गरौं न । यो पनि त आन्तरिक बजार बढाउने उपाय हो नि त ।
प्रतिश्पर्धी निश्चित नै छ । खपत धेरै भएन भने सबै चीज महगो हुने हो । हाम्रै सामान चीनमा लगेर दशौं गुणा सामान बनाएर हाम्रो भन्दा सस्तो बेचिरहेका छन् ।
हामी सबै नेपालीले नेपाली सामान प्रयोग गर्ने नीति बनाउने हो भने हामी पनि खपत बढाएर प्रतिपर्शी मूल्यमा दिन सक्छौं विदेशमा पनि प्रतिश्पर्धा गर्न सक्छौं ।
विदेशमा हस्तकलाका सामान बनाउन मेसिन प्रयोग भइसके कतिपय त नेपालमा पनि मेसिन ले बुट्टा काट्ने चलन आइ नै सक्यो यसले नेपाली हस्तकलाका सामान विस्तापित हुँदैन ?
यसले हामीलाई असर गर्दैन । हामी के कुरामा गर्व गछौं हामी गुणस्तरिय सामान प्रयोग गछौं । मेसिनले बनाएको सामान हेर्दा आर्कशक छ तर गुणस्तर छैन । युरोप अमेरिकामा धनि मान्छेहरु छन् ।
उनीहरु गुणस्तरिय सामान मन पराउछन् । हाम्रै सामान किन्छन् । मेसिनले लाखौं संख्यामा सामान बन्छन् । हामी हजारको संख्यामा मात्रै सामान बनाउछौं ।
गुणस्तरिय सामान थोरै हुन्छ महँगो हुन्छ । यनीहरु कागजलाई काठजस्तो बनाएर पठाउछन् । त्यो घाम पानीले विग्रन्छ । तर नेपानी सामान सही हुन्छ । काठ भने काठै हुन्छ घातु भने धातु नै हुन्छ ।
०७८ सालको मौद्रिक नीतिमा एककृत टे«डमार्कमा जाने कुरा आएको छ ।
व्यक्तिगत रुपमा टे«डमार्कमा जान नसके पनि सामुहिक रुपमा जान पनि त सकिन्छ नि । हामीले यसलाई एउटा अवसरका रुपमा लिएका छौं । मंसिरसम्म टे«डमार्कमा जान सकियो भने राम्रो हुन्छ । डकुमेन्ट बनाउन सुरु भइसकेको छ ।
तर समस्या नीतिमा छ । प्याकेजिङ र लेभलिङमा समस्या छ । लाखौं पर्ने हस्तकलाको सामान सामसुङ टिभिको वाकसमा प्याक गरेर पठाइरहेका छौं । लेभलिङ र प्याकेजिङ कसले गर्ने ? यो सबै नीत नभएर भइरहेको छ ।
भोलि विदेशी कम्पनीले हाम्रो सामान कपी गरे हामीले दावी गर्न सक्छौं । टे«डमार्क हुर्दा हामी अन्तराष्ट्रिय संस्था वाइपामा आफै रजिष्टर हुन्छौं । त्यसमार्फत कपीराइटको मुद्दामा लड्न सक्छौं ।
यो सबै काम नीजि क्षेत्रले गर्न सक्दैन र सरकारसँग मिलेर गर्नुपर्छ । तर सरकारलाई हामीले बुझाउन सकेका छैनौं । बुझाए पनि सरकारी निकायमा बस्नेहरु सरुवा भएर जाँदा काम हुन सकेको छैन ।
News Views: 95
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न पदमा ८३६ जना...
वि.सं.२०७८ मंसिर ११ शनिवार ०८:४१
देशमा शिक्षित बेरोजगारको अबस्था कस्तोसम्म छ भन्ने एउटा तस्विर...
नेपाल बैंकले पुस २ गते वार्षिक साधारण...
वि.सं.२०७८ मंसिर ११ शनिवार ०८:२९
काठमाडौं । नेपाल बैंकले पुस २ गते वार्षिक साधारण...
लक्ष्मी लघुवित्तको बार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, लाभांश प्रस्ताव...
वि.सं.२०७८ मंसिर ११ शनिवार ०८:१९
लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । मंसिर...
वि.सं.२०७८ मंसिर ११ शनिवार ०८:१२
काठमाडौं । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सको बोनस सेयरमा मूल्य समायोजन...
वि.सं.२०७८ मंसिर ११ शनिवार ०८:०३
काठमाडौं । गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ११औं वार्षिक...